हजुरबाले ‘हाम्रो परिवारको रेखदेख गर्नु’ भनेर तेजबहादुरलाई भनेका थिए, तर नातिले उनकै परिवार..? – Classic Khabar
September 12, 2021 118
मादी नगरपालिका– १ उम्लिङ खोलागाउँको घट्नामा सं’लग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका लोकबहादुर कार्कीले आफूले एउटै चि’र्प’ट’ले ६ जनाको पालैपालो ह’ ‘त्या गरेको बताएका छन् । आइतबार प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले आफूले ह’ ‘त्या गरेको स्वीकार गरेका हुन् । प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख डीआईजी अरुणबहादुर बिसीले कार्कीले योजनाबद्ध नभई आवेगमा आएर ह’ ‘त्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको जानकारी दिए । घटनाको अघिल्लो रातभर कार्की नसुति विक्षिप्त मा’न’सिक अवस्थामा रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मृ तक तेजबहादुर कार्कीप्रति प्रतिशोध साँध्नकै निम्ति उनले सो घटना घटाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
Prevदीपक मनाङे भन्छन्,- मेरो सम्पत्तिबारे म आफैं कन्फ्युज छु मेरो के छ ? के छैन ? थाहै छैन
Nextह’त्या आ’रोपी लोक बहादुरले एकाएक बयान फेरेपछि…